WhatsApp Desktop, isiri yepamutemo yekushandisa yeGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inonyanya kuzivikanwa mameseji kunyorera munyika, WhatsApp, inogara iine dambudziko, dambudziko rakakomba kune vashandisi vanoishandisa nguva dzose: haina desktop desktop.
Pamutemo WhatsApp haina desktop desktop asi pane zvakawanda zvakaenzana zvakanaka pane iyo smartphone app. Imwe yacho ndeye kushandisa WhatsApp Webhu, chinzvimbo chepamutemo chinoda kuziva kune uyu mutengi.
Kutenda tekinoroji yeElectron, mugadziri anonzi Enrico204 akakwanisa kugadzira chishandiso chinoshanda zvakafanana neyemutemo smartphone mutengi asi mune ino kesi yakanangana nekombuta kana komputa yekomputa. Ichi chishandiso chinonzi WhatsApp Desktop. WhatsApp Desktop chishandiso yakanyorwa mumagetsi iyo inogona kuiswa mune chero kupi kweGnu / Linux kugoverwa zvakare muWindows kana MacOS. Iyo yemahara uye tinogona kuiwana kubva Iyi link.
WhatsApp Desktop inotsigira ese azvino WhatsApp maficha uye Iwe haufanire kuve neapp yakavhurwa kana kuve neiyo smartphone pane imwecheteyo network seiyo WhatsApp Web. Isu tinogona kunyange kugadzirisa iyo avatar uye chimiro cheakaundi yedu kubva kunyorera.
WhatsApp Desktop haisi yega isiri yepamutemo WhatsApp mutengi kunze uko. Parizvino tinogona kusarudza maficha senge waya o Franz izvo zvinotibvumidza isu kuve nemeseji dzeWhatsApp pamwe neakakurumbira mabrowser ekuwedzera ayo anoita kuti tigamuchire zviziviso patinenge tichitsvaga paInternet. Iyo yekupedzisira inoshandisa iyo WhatsApp Web API, saka isu tichafanirwa kuzviita izvozvi yakajairwa pikicha kune iyo QR kodhi kuti iite kubatana.
Chero zvazvingaitika, zvese izvi zvekuwedzeredzwa uye WhatsApp Desktop maapplication anogona kushandiswa kwechinguva chekuda kana muchiitika chekuda kushanda, asi kwete sekushandisa nguva dzose, sezvo WhatsApp ichiri kugadzirirwa yeescreen skrini kunyangwe paine mukana wekuti shandisa Whatsapp yepiritsi mune matanho mashoma ari nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » WhatsApp Desktop, isiri yepamutemo yekushandisa yeGnu / Linux
Ichi chishandiso chakafanana neshanduro yewebhu. Uye mugadziri mumwe chete anoti: Chero kutaurirana pakati pemushandisi neWhatsApp maseva kunoitwa nevakuru WhatsApp Webhu pachayo; ichi chingori chiputira chemuno cheWhatsApp Webhu, seye browser.
Uye Wire haibate WhatsApp mameseji.
Chinyorwa chizere nezvikanganiso.
WhatsApp ine rimwe dambudziko rakakomba, ndeyemuridzi uye hatizive zvazvinoita kumushandisi.
Izvozvowo zvinogona kuitwa na nativefier, vagara vakaburitsa mashandisiro ekushandisa chishandiso ichi. Ini ndiri Archlinux mushandisi uye saka ndinoshandisa WhatsApp Desktop (WhatsApp Web)
Iko hakuna kana chinhu, sezvazviri, seTeregiramu.
Teregiramu? ... izvo hapana chinhu, kusvika parizvino, chakaita seSignal.
Pindura ku x20928vqt
Muri kutaura chokwadi, iro rega dambudziko neTeregiramu kupinza kwakadzika pakati pevazhinji vashandisi, avo vanoramba kusiya WhatsApp. Ndakaisunungura nekuti hapana kana mumwe wevandaibatana navo aive neichi chishandiso pane yavo kifaa
Rambox inogona zvakare kushandisa WhatsApp, chete iyo inobvumidza mamwe maturusi kuti ashandiswe panguva imwechete, seTeregiramu, Twitter, Facebook Messenger, GMail nevamwe.
tarisa pane zvese zvakaipa ushandise kubva kunharembozha (zvinosetsa)
GNU / Linux yekuparadzira katalog maererano nezvinodiwa zvako: 11 distros 11 professional